Ny sehatra marketing-nao dia tsy marina araka ny noeritreretanao | Martech Zone
Betsaka ny olona tsy mahatsapa ny fetran'ny Analytics ary sehatra marketing amin'ny fandrefesana tsy manam-paharoa mpitsidika. Ny ankamaroan'ireo sehatra ireo dia mandrefy mpitsidika amin'ny fametrahana a mofomamy, fisie kely izay resahina isaky ny mitsidika ny tranonkala ny mpitsidika iray amin'ny alàlan'ny mpitety tranonkala iray ihany. Ny olana dia ny mety tsy hamerenako ny tranokalanao amin'ny navigateur iray ihany… na mety hamafana ny cookies-ko aho.
Raha mitsidika ny tranokalanao amin'ny findaiko, takelaka, solosaina finday sy birao aho… lasa mpitsidika tsy manam-paharoa 4 aho. Raha nodioviko indroa ny bisiko ary niverina tany amin'ny tranokalanao, dia vao mainka lasa mpitsidika tsy manam-paharoa aho. MediaMind dia mampiasa teknika antsoina hoe mpitsidika tsy manam-paharoa nohazavaina ary manazava izany amin'ity horonan-tsary ity izy ireo - mampiditra algorithm fanitsiana fananana amin'ny statin'ny mpihaino anao. Azavain'izy ireo eto ny tatitra be loatra ataon'ireo mpitsidika tsy manam-paharoa:
Tsy eo aminao fotsiny ny olana Analytics, na izany aza. Misy akony lehibe eo amin'ny sehatra marketing an-tserasera izay manara-maso ny fihetsiky ny mpitsidika sy ny demografika rehefa mandeha ny fotoana. comscore maminavina ny famafana cookie noho ny olana lehibe kokoa. Avy amin'ny comScore, ny fitadiavana ny marina amin'ny alàlan'ny cookies (% of the impression has been akurat):
70% ho an'ny demo 1 (oh: vehivavy)
48% ho an'ny demo 2 (oh: vehivavy 18-34 taona)
11% ho an'ny demos 3 (oh: vehivavy 18-34 taona miaraka amin'ny ankizy)
36% ho an'ny lasibatra fitondran-tena
Tsy natao hanaratsiana ny anao izany Analytics na ny sehatra automatisation marketing anao. Fampitandremana fotsiny amin'ny fahatokisanao ny rafitra fanaovana tatitra toa izao. Ho an'ny mpivarotra dia eto no ahafahan'ny sehatra misy fidirana ankolafy fahatelo sy fampidirana an-tsokosoko hitodihana tsara kokoa ireo mpitsidika anao amin'ny salantsalany sy ny fotoam-pivoriana. Raha mila ny mpitsidika anao hiditra amin'ny tranonkala ianao, amin'ny app anao finday, na amin'ny interface hafa - azonao atao tsara ny mikendry ireo mpitsidika ireo ary mamaha marina kokoa ny isan'ny tena izy tsy manam-paharoa mpitsidika.
Ny fampahalalana momba ny fironana dia zava-dehibe kokoa rehefa mampiasa ireo metatra ireo ianao. Ny maridan'ny lesoka amin'ireo media dia tsy hiova tampoka - ka rehefa mandeha ny fotoana raha toa ka miakatra mankany ambony ny mpitsidika anao manokana dia manao ny tsara ianao. Raha tsy izany dia mety manana asa hatao ianao.
Tags: mpitsidika tsy manam-paharoa nanitsycomscorempanelanelanaMpitsidika tsy manam-paharoafanaraha-maso ny mpitsidikampitsidika
Ataovy toy ny Ninja ny sarany vidiny sy fampitahana
Oct 23, 2013 amin'ny 9: 49 AM
Misaotra nizara Doug! Tena namaky tokoa ity ary nahatonga ahy hieritreritra! ..
Jan 4, 2014 ao amin'ny 5: 19 AM
Nyfv Vao haingana aho dia tena nandany vola ary ny debit dia nihinana ahy avy amin'ny lafiny rehetra. izany dia Mandra-pahatongako mianatra mamorona vola .. amin'ny INTERNET. Nitsidika ny pointmoneymaker point net aho, ary nanomboka nameno ny vola ho an'ny fanadihadiana, ary tena afaka nanao financialy be aho !! faly aho fa nanao an'io .. mKBu